Isikali seFektri-abaTshali base China abavelisi, abaXhasi
Isalathi sokulinganisa esingumlinganiso weJJ
Inqanaba lokungena kwayo linokufikelela kwi-IP68 kwaye ukuchaneka kuchanekile. Inemisebenzi emininzi efana ne-alam yexabiso esisigxina, ukubala, kunye nokukhuselwa okuthe chatha. Iselfowuni yomthwalo nayo ayinamanzi kwaye inokhuselo oluthembekileyo kumatshini.
Inqanaba lokungena kwayo linokufikelela kwi-IP68 kwaye ukuchaneka kuchanekile. Inemisebenzi emininzi efana ne-alam yexabiso esisigxina, ukubala, kunye nokukhuselwa okungaphezulu. Kulula ukuyifaka kwaye kulula ukuyisebenzisa. Zombini iqonga kunye nesalathiso azinamanzi. Zombini zenziwe ngentsimbi engenasici.
Inqanaba lokungena kwayo linokufikelela kwi-IP68 kwaye ukuchaneka kuchanekile. Inemisebenzi emininzi efana ne-alam yexabiso esisigxina, ukubala, kunye nokukhuselwa okungaphezulu.
Isilinganiselo sokulinganisa kwinqanaba lebhentshi
48mm isihlokwana esikhulu somboniso wedijithali eluhlaza
I-8000ma lithium ibhetri, ngaphezulu kweenyanga ezi-2 zokutshaja
1mm izindlu ubukhulu insimbi engatyiwa
Isihlalo esime-senziwe nge-stainless steel kufuneka sonyuse indleko malunga needola ezi-2
Isilinganisi sokulinganisa insimbi engenasiphelo kwisikali seqonga
Inguqu epheleleyo yocingo lobhedu, ukusetyenziswa kokubini ukutshaja kunye nokuplaga
I-6V4AH ibhetri ngokuchaneka okuqinisekileyo
Isidibanisi esijikelezayo esingama-360 esinee-angle zokujonga ezinokuhlengahlengiswa
Isitulo esine-stainless steel se-T kufuneka sonyuse iindleko
Isibonisi sokuqhuma Isalali sokulinganisa ubunzima bentsimbi
Izindlu ezingama-304 ezingenazintsimbi ezineeringi engangeni manzi.
4000ma lithium ibhetri, iinyanga 1-2 ngentlawulo enye;
Isatifikethi sokuqhushumba, kunye ne-3.7V yokugcina amandla awodwa omenzi
Isalathisi esitsha sokulinganisa i-ABS kwisikali seqonga
Umsebenzi omkhulu wesisindo se-LED
Ukulinganisa kunye nokuziva kunokulungiswa, kunye nemisebenzi ebanzi
Isalathisi sokubala se-ABS kwinqanaba leqonga
Isikali sokulinganisa sokulinganisa, Ubunzima obuqinisekisiweyo, UkuLungiswa kweMisa, Ubunzima bokulinganiswa kwamaNqanaba amaDigital, UkuLungiswa koBunzima beSeti, Ishedi ye-Shear Bead Cell,